Scary muunganidzwa anouya uye haridzokeri vakakwereta mari?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Scary muunganidzwa anouya uye haridzokeri vakakwereta mari?
Munguva mafirimu uye mutambo mari yacho, chiitiko Kazhinji kuita kutyisa muunganidzwa pamusoro nechikwereti.
saka kure avo havasati vakakwereta mari kubva zvemari masangano, zvingava zvinoorora zvikuru chikamu.
nokuda muunganidzwa mhando iyi, sei rakaitwa munyika chaiyo? We waitsanangura hwakadzama nyaya.
uye rinonyanya hapana kuunganidza, dzakadai mutambo
moneylender, vanotyisidzira kubva pakutanga chinhu mangwanani banging mukova nechisimba, zvingava zvakawanda vanhu vari vane mufananidzo, akadai.
Zvisinei, handina kupa chaizvoizvo rokutanga ndechokuti mari Lenders kuita chakadaro muunganidzwa iri. Kana
nokuti, kunokanganisa ari yemakambani mufananidzo kana chinhu chakadai.
vanonzi kutyisa muunganidzwa ndiko, kufunga kuti avo kuteererwa rima mari yakadai zvikwata zvomumigwagwa kuti utariri kwaizova chakasviba. In
, uye Lenders mari vanoti kana kuita kworudzii kuunganidza, kana chikwereti chemhosva yakanonoka, kubva kupfungwa zvemari kuchaita kukurukura newe chimiro, akadai tsamba runhare uye e-mail, chisimbiso.
hackers hapana zvakananga kuonana.
Zvisinei, kana musingadi kutora munhu uye kugadzwa, zviri zvakare haana kujairika kuti dzakadai mhuri uye kubasa anouya runhare.
Naizvozvo, kuitira kuti atarisire kupati rechitatu, nokuti chokwadi chemhosva musi Edza kutora chisimbiso.
muunganidzwa pane mirayiridzo vakasarudza nyika
Kutaura zvazviri, imi munoziva kuti kambani zvemari pacharo mune zvimwe zviitiko muunganidzwa, dzakadai mutambo angangozova mutemo kutyorwa? Rinoshandisirwa unyanzvi aite anomukweretesa uye nokukwereta
nemari, Mari Lending Business Law, hwakagadzwa chinhu anonzi "mutemo pachikamu mabasa", mutemo uyu achava pasi chirango.
Somuenzaniso, chero bedzi hapana pamutemo chikonzero, pane mitemo inofanira kuita kuunganidza kuno wakatora chikwereti kunze 8:00 pm 9 am kusvika.
Nemamwe mashoko, akadai kuramba kusateerera kuonana kubva moneylenders, sokuvapo chikwereti pachayo haripi chikonzero, moneylenders chinhu havabvumirwi kuunganidza masikati sezvo kutanga basa rako.
Uyezve, pane chinangwa mutemo uyu kudzivirira toga chikwereti, posita uye nezviratidzo, Chokwadi, uende kuunganidzwa muzvikwereti nenzwi guru, kuita kana Isuwa 'kutyora. Kuti chokwadi chokuti chikwereti akapoteredza
hakusi kuti chiedza, Lenders uyewo vanofanira kuteerera.
kutaura waiva mutemo uyu nzira, pakutanga pamwe eHurumende Financial Services Agency wakadzikwa nhungamiro kuti muunganidzwa.
Saka, chiito yakanga zvino kuenda, Shirezu ingangobatanidzwa sued achinje, moneylenders ndiko kutaura kwete kushandisa kunyanya muunganidzwa.
kuti chikwereti muunganidzwa sangano
mari masangano, pane dzakaunganidzwa mu-imba, panewo nzvimbo chikumbiro kuna chikwereti muunganidzwa sangano. Zvakadai sepaya
mutsividzo vakanga varamba zvakananga kunyora kana foni mukuwedzera kuonana wasvika, nezvimwewo, inozivikanwa kuita kuunganidza zvishoma nehasha pane mari kumasangano ari nyanzvi mune kupora.
ungada kuona pano, kubiridzira kuti.
kubiridzira kambani se chikwereti kuunganidza nounyanzvi ichangobva uyewo zvakapararira. Kuwedzera
nokukwereta vo, muchimiro kunyorerana, akadai kuti kunanga avo vakanga vakabhadhara pamwedzi wakaiswa uye pafoni kugutsikana, uye kubiridzira kuti kutaurwa nhamba vanhu. Akadai se
"chibvumirano haasi pamusoro asi," "kubhadhara harina", nokuti mashoko nounyanzvi akataura zvakanyorwa, hapana shoma nyaya kuti aidai chinhu ari vanhu vasingazivi kunyengerwa. Chero bedzi
haasi kujairana, inoti kufuratira ndechokuti yakanakisisa.
kana chemhosva iri kunonoka, kunyange kutyisa muunganidzwa haabvi chevanorwara zvemari, imi munoti muzviitiko zvakawanda pasi muunganidzwa kubva nyanzvi, akadai chikwereti kuunganidza nounyanzvi.
kana paine akanyorwa kana parunhare kuonana, etc. kuti nokukurumidza kuwa, Edza kuita mangwanani chisarudzo.
kana kuita nokukwereta, zvinokosha kuti zvakajeka kuzopiwawo chirongwa panguva iyoyowo. Apo
aizova kunyanya mutsividzo refu, kuti ave fomu kubhadhara zvakawanda kuti mari mubereko, Edza kuona kwokupedzisira mutsividzo musi pachine pachako.
vakarondedzera / Recommended kadhi chikwereti
kukwereta mari musi iwoyo